China Iphrinta Yezinkuni China Manufacturers & Suppliers & Factory
Iphrinta Yezinkuni - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Iphrinta Yezinkuni)
Thenga iWindows PrinterEepson Wood Printer
Iphrinta yezinkuni ingaphrinta izithombe ezimibalabala kunoma iyiphi impahla enekhwalithi engcono kakhulu. Thenga i-Printer Wood I-Eepson Wood Printer xhuma nekhompyutha evamile, noma iyiphi i-picutre kukhompyutha yakho ingashicilelwa. Ikhwalithi yokunyathelisa iphelele, ukucaca okuphezulu, ukuvikela izithombe...
Iphrinta yezinkuni ibizwa nangokuthi iphrinta yonke yephrinta noma i-UV iphrinta ephrintiwe, ububanzi besicelo sayo bubanzi kakhulu, ngokuvamile imikhiqizo ephathekayo inganyatheliswa, iphrinta yendawo yonke esetshenziselwa embonini yeglasi ingaphezulu kakhulu, njenge-panel panel, amapaneli kagesi , iphaneli lokushisa...
Iphrinta yezinkuni inganyatheliswa ezintweni ezilukhuni, iphrintiwe ezintweni ezithambile, futhi inganyatheliswa emakhakheni amnyama, abomvu, amhlophe namanye ambala, futhi iphrintiwe ngombala omhlophe ogcwele umbala. Ukuzikhandla ukugeza kuyinto 3-4 grade, umbala akusho fading, futhi umuzwa omuhle. I-A3 UV Printer...
Ukuqondisa ngqo kwi-Wood Printer Canada
I-REFINECOLOR Technology Co., Ltd ingumkhiqizi ochwepheshe we-flatbed wood printer , i-R & D yenkinobho, ukukhiqizwa nokuthengisa. Imikhiqizo yenziwe yonke inqubo yobuchwepheshe bephrinta ye-EPSON, futhi ithunyelwa emazweni amaningi njenge-Southeast Asia, i-Europe neMelika. Imikhiqizo eyinhloko yi: flat printers...
Iphrinta Yezinkuni Iphrinta yezinkuni Iphrinta yezinkuni Uk Iphrinta kwizinkuni Iphrinta yeBiscuit Iphrinta ye-Mini Mini Iphrinta kuKhafi Iphrinta ye-CMYK yezinkinobho